Imikhiqizo Jedo yenkampani: strollers. Izibuyekezo kanye Incazelo
Omunye nezindaba kunazo ukuphokophela ukukhethwa strollers enganeni. Ububanzi omkhulu namuhla bese ukhetha lowo wanelisa ezicini zonke, ngempela kanzima. Sekuyisikhathi eside imikhiqizo yenkampani Jedo (kuhlanganisiwe ukuthutha) umise ngokwaso ezimakethe European futhi Russian njengoba izinga futhi zikhululekile.
imikhiqizo yenkampani Jedo: Quality nokwethembeka
Ayikho into ebaluleke ngaphezu ukubukeka umndeni womntwana. Kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila abazali ozama bayamhaqa ngokunakekela futhi asiduduze, futhi ngokucophelela ikakhulukazi Ukukhetha imikhiqizo izinsana. Omunye abakhiqizi izinga izingane iyinkampani Jedo. Strollers nemoto izihlalo wale nkampani zaziwa emazweni amaningi aseYurophu, kuhlanganise eRussia.
Imikhiqizo, oveza inkampani, lihlangabezana ngamazwe izitifiketi izinga. Ukuze indalo yayo, sebenzisa kuphela ephezulu, izinto ephephile futhi izindwangu zemvelo.
Ikhishwa Jedo sabakhubazekile itholakala onobuhle amane: Bartatina, Fyn, Neiva futhi Pati. Zonke ayatholakala okunezinhlobonhlobo eziningi umbala imiklamo. Lokhu abazalwa Transformers stroller ezingaba kwamandla eligoqiwe balinganise kuncane.
Amakalishi Jedo, ukubuyekezwa zazo lingama omuhle, ekhuthaza inani elihle kanye izinga enhle futhi izinto eziphephile. Endaweni ehlukile, kuyafaneleka ukuthi ngisho isihlalo esinamasondo akayinekezi raincoat uma Unamekwe ngokugcwele, ingane akesabi imvula, eqinisweni ihlanganisa lendwangu waterproof ngokuphelele.
Izinketho onobuhle zingase zihluke. It kuncike ngokuyinhloko nezidingo zamakhasimende. Nokho, lokhu akusho ukuthi noma iyiphi indlela kuthinte izinga ezinamasondo bebonke. Bonke baye bafaka izakhi elandelayo:
isikhwama i baby zosizo.
Njengoba iwumthombo umntwana ingafakwa futhi asuswe chassis. Iphinde evikelwe usebenzise inetha elivimba omiyane. Njengoba iwumthombo yakhelwe izinsana kuze izinyanga eziyisithupha. Lapho ingane ikhula, kungashiwo zidluliselwa ku-isihlalo iyunithi. Kodwa kufanele acabangele izici ngamunye wengane, ngoba othile Rolls futhi isikhathi eside imbeleko, futhi abanye ngokushesha outgrow kulomkhakha.
Ukuhamba block ngempela libanzi futhi zikhululekile. Ngisho ebusika, ngesikhathi usana abagqoke kahle, kuba kufanelekile futhi kuyoba ukhululekile kungabikho izinkinga. Phathani ingane esihlalweni iyunithi lingafika engu-3.
Bag-accessory lubaluleke omama, sishaywe bejwayele ukuthatha izinto eziningi umntwana. SiGaba aphansi ivumela sishaywe ukuthenga futhi ningathwali izikhwama ezisindayo ezandleni zabo.
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo Jedo Bartatina
Le modeli yisona esikhulunywa abantu abaningi futhi ethandwa. Njengomhlaba abanye, usebhekene ukulungiswa eziningana nokuthuthukiswa. Ngemva imodeli classical khona Jedo Bartatina plus ukuthutha leyehlukile esasisandulele khona embhedeni neliphelele kunalelo ukukhweza uhlelo. Kulesi imodeli, iziqobosho entsha ezithambile phezu ibhande, kanye Uhlaka ezenziwe ngensimbi.
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo Jedo Bartatina Alu Plus futhi kwakuqala ukwanda kokubili eRussia futhi emazweni ase-European. Abakhiqizi bakwazile ukuhlanganisa ke zonke izimfanelo ezidingekayo: ukuphepha, lula, isitayela kanye nomklamo. Futhi okubaluleke kakhulu, kuba isilinganiso nemingcele ezifana ne- "intengo-izinga." Kulesi imodeli, kukhona okwengeziwe Uhlaka engasindi eyenziwe aluminium, okuyinto alula kakhulu kunomoya uzimele yangaphambilini ye steel cishe 2.5 kg.
It is alithanda kakhulu stroller Jedo Bartatina Alu Elegance 14 '', okuyinto ngaphezu Uhlaka engasindi has a isondo kancane lakhulisiwe. Ngenxa yalokhu kukhona lutho ukuvimbela ukuhamba nengane yakho, ngisho ungqimba obukhulu kweqhwa.
izici Jikelele izihlalo zabakhubazekile
Kunikezelwe Jedo strollers isisindo ngempela ukukhanya. Okungenani uma iqhathaniswa imikhiqizo efanayo ezimakethe Russia naseYurophu. Ngokwesibonelo, stroller Jedo Bartatina 2 1 has a isisindo Imininingwane kanye nemibhede mayelana 13 kg.
Ngenxa wheelbase sasivumela ezincane (cm 60) lokhu stroller kwamandla faka ikheshi. A eligoqiwe ke ezokwamukeleka izimoto kakhulu.
Amasondo esikhulu izinaliti ukusiza ukujabulela njengoba sishaywa umoya, ngisho noma ngabe umgwaqo eneqhwa. Wheel ubukhulu - 30-32 cm, kuye ngokuthi model.
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo hood kusukela phansi kuze ukuphakama 125 cm, kusukela phansi kuze ukusingatha - 115 cm.
Isihlalo iyunithi kungenziwa zifakwa kokuqondisa yezokuvakasha kanye ngokumelene nalo. Kuyinto elula kakhulu, isibonelo, uma uhlangana eqinile kuphephetha, kwanele ukuze ujike block nalapho umoya akesabi ingane.
Iyunithi has backrest ahlukahlukene okuyinto adjustable kusuka ovundlile ngokuphelele cishe mpo. Zonke lingasethwa 4 izikhundla ezahlukene.
Izici Ezihilelekile Kule imbeleko
Classic futhi FreeLine - izinhlobo ezimbili nemibhede asetshenziselwa namakalishi Jedo. Umehluko nokuncane kakhulu: e sombuso wokugcina ungeze kuphela ukubukwa iwindi e kwenzakalani. Kungakhathaliseki uhlobo imbeleko Jedo abe nezici elandelayo:
Isikhundla umntwana imbeleko kungase kushintshwe: ngemuva kungathatha 6 izikhundla ezahlukene. Ngenxa yalokhu, lapho umntwana abadadlana, wayengeke akwazi ukushintsha isimo, ngakho wafuna izwe ihamba.
Hoods e sombuso buthule ngokuphelele: basuke ukwehlisa futhi podymanie bangavuki ingane bezihambela.
izibambo Special ukudlulisa yayo zinikezwa ezinhlangothini imbeleko.
Ubukhulu we imbeleko:
ngaphakathi kwi kumatilasi - 76 cm;
Amashalofu okubeka ngaphakathi - 80 cm;
Ukujula - 20 cm.
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo Jedo 2 1: ngebuhle nebubi
Omunye izinzuzo eziyinhloko:
inhlanganisela eqinile, izinto engasindi ukudala stroller Uhlaka;
imbeleko kungaba zivuleka kuzo zonke izinhlangothi ezine, ukuze ukwazi kalula ukusikhohlisa ingane;
Ungakwazi ulungise isikhundla backrest e sombuso kanye isihlalo iyunithi;
ukumiswa ezinhle ku lesikhumba amabhande;
Ungakwazi ukufaka izihlalo imoto Iqembu 0+ kusukela Jedo amafemu, Recaro, Maxi-Cosi;
kuqhathaniswa embodiments efanayo stroller has a isisindo ongaphakeme;
ubukhulu elincane ivumela sabakhubazekile ukuthutha wakhe ukuba ikheshi;
ngenxa usayizi amasondo kuba kalula kungenzeka ukuhamba ngisho ne endleleni eneqhwa.
Kodwa kungakhathaliseki ukuthi kunzima abakhiqizi, ukwakha into ephelele ngokuphelele kungenzeka. Jedo futhi strollers babe nemiphumela ethile engathandeki eziningana. Okokuqala, abazali abaningi ukubika ukuthi onobuhle amadala akuzona hoods ezinhle kakhulu. Kodwa umkhiqizi lithuthukile kancane ku onobuhle zabo ezintsha.
Futhi kusimo wukuthi stroller asifanele kakhulu uhambo, ngoba bengakwamukeli isiqu imoto eligoqiwe.
Kakade eziningi abazali isikhathi ukuba sazise inkampani ukuthutha Jedo. Uma ekuhlaziyweni ukubuyekezwa, amaphuzu alandelayo kungenziwa ezigqanyisiwe:
stroller emangalisayo ezikwazi, futhi sibonga amasondo ezinhle uyakwazi kudlule kunoma iyiphi amaxhaphozi, izindunduma futhi emigodini;
sibonga esiyingqayizivele Damping uhlelo ku amabhande e ingane ukuthutha cishe engazizwa kunyakaza futhi shaking, ukuthutha ugibele ngokushelela nangokucophelela;
ububanzi ukuthutha ungakwazi bawuthwale e ikheshi. Nakuba kukhona kufanele acacise ukuthi zommbila, okuyinto efakwe iminyango lwezimpawu iraba ezivalweni, kwakukhona abanye nobunzima: abazali kwadingeka kancane (ambalwa cm) push umnyango ngesandla ukuba ukuthutha sima ikheshi;
ngokuvumelana iningi abazali, stroller ehlanganisa isilinganiso kahle intengo nekhwalithi nemingcele;
imbeleko, kufana nokuhamba block, ebanzi ngokwanele ukuze ingane ngisho ovaloli ebusika kulula ibekwe;
ukudlula yokuhlanza nokugeza namakalishi ngaphandle kwezinkinga: zonke izingxenye kungaba zisuswe, futhi kwezinye izimo, umane Sula ngendwangu emanzi.
Kukhethwa imikhiqizo izingane uhlale isikhathi eside abahlezi engqondweni abazali, ngoba njalo zama ukunikeza ingane yabo kangcono. Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo - lokhu ingenye izakhi ezibaluleke kakhulu, ngeke akwenze ngaphandle onyakeni wokuqala wokuphila kwengane. Stroller Jedo anezici ezinhle. Ngo yokudalwa asetshenziswa kuphela eliphezulu izinto ukuthi amnandi ukusebenzisa futhi ngeke ukulimaza Daze yakho. Ngokujwayelekile, siyindlela esinokwethenjelwa izindleko sincane, okuyinto ejabulisa kanye nokubukeka, futhi izici zabo.
Ukukhetha ingxube isibilile izinsana
Izingane ewusana olusanda kuzalwa osayizi. Ubukhulu of indlwana for nosana
"Izofra": analogue, ukubuyekezwa, intengo kanye yokusetshenziswa
"Ubungane" - ekamu izingane: ngezibuyekezo nezithombe
Isisekelo segrama yesigwebo
Indlela ekhiphela up intombi cindezela ekhaya? Kulula kabi ...
Yini ukunikeza owathandayo Lokuzalwa izipho ejwayelekile hhayi kuphela
Buza sonnik: cal ukubona - ingabe okuhle noma okubi?
Ithebula amaseviyethi - isixazululo kuhle izakhiwo nesizotha
Yabantu National Party: isinyathelo maqondana wobushiqela